थाहा खबर: ज्ञानेन्द्र खड्का
कोरोनाको बहानामा पन्छिँदै अस्पताल, उपचार नपाई मर्दैछन् बिरामी
काठमाडौं : नेपालमा कोरोना पुष्टि भएको गत जनवरी २३ तारिखमा हो। चीनबाट आएका एकजना युवकको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पहिलो पटक कोरोना पुष्टि भएको थियो। तर नेपालका पहिलो बिरामी अहिले सन्चो भइसकेका छन्। त्यसयता चारजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जसमा दुईजना बेल्जिय...
अमेरिकामा बसेर नेपालमा अफवाह
काठमाडौं : विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सबैभन्दा त्रास अफवाह फैलाउनेका कारण बढिरहेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्ध विश्‍वजगत नै 'युद्धमोर्चा' मा खटिइरहेको छ। नेपालले रोकथामका लागि त्यही स्तरको तयारीलाई तीव्र ...
फ्याक्ट चेक : कति सत्य हो नर्भिक र शिक्षण अस्पतालबारेको अडियो?
काठमाडौं :शनिबार बिहानैदेखि एक मिनेटको अडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेन्जरबाट भाइरल भइरहेको छ। सरकारले देशलाई शुक्रबारबाट 'सेमी लकडाउन'मा लगेको अवस्थामा फैलिएको यो अडियोका कारण सर्वसाधरण त्रसित भइरहेका छन्। एकजना युवकले हिमाल नाम...
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का सबै कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं : चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिएर महामारीको रुप लिन थालेपछि सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी भ्रमण वर्ष २०२० का सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको...
अख्तियारको नाममा सञ्‍चार मन्त्रालयमा कसले मार्‍यो छापा?
काठमाडौं : करिब २७ अर्ब रुपैयाँको सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिदका लागि ५५ करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत बिहीबार राजीनामा दिए। स्वीस कम्पनीका एजेण्ट भनिने विजय प्रकाश मिश्रले नेपाली कांग्...
भीम रावलका प्रश्‍नले चिढिए प्रधानमन्त्री ओली! के हो बालुवाटारको धम्की?
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा खरो आलोचकका रूपमा चिनिएका छन् भीम रावल। तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मतसहित उपाध्यक्षमा निर्वाचित रावल माओवादीसँगको एकतापछि सचिवालयमा परेनन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन एमालेका उपा...
अर्को विद्रोह ‘दिदीबहिनी टीका'
काठमाडौं : समय गतिशील छ, परिवर्तनशील पनि। मानिसले आफ्ना अभ्यासहरुलाई समयसँगै परिवर्तन गर्दै लैजान्छ। समयको यो नियम मानिरहेकाले मानिस आजसम्म पृथ्वीमा सर्वश्रेष्ठ प्राणीका रुपमा अस्तित्वमा छ। भाइटीकाका दिन कतिपय चेलीहरुले परिवर्तनको यही नियमलाई पछ्याउन थाल...
एनआरएनको 'भद्रगोल' सम्मेलन : विमानस्थलमा तोडफोड, हायात होटलमा कुर्सी भाँचाभाँच
काठमाडौं : नेपाल र नेपालीको हितमा सक्रिय भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौँ सम्मेलन सुरु भएदेखि नै विवादमा फसेकको छ। हायात होटलमा २८ गते राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुअघिदेखि नै विवादमा फसेको एनआएरएनएको सम्मेलनमा एकपछि अर्को गाईजात्रा हुने गरेको छ। ...
हामी युद्धमा गयौँ भने प्रचण्ड-ओलीको औचित्य सकिन्छ
केही दिनयता सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले वार्ताको कोशिश गरिहेका छन्। वार्ता अघि बढाउन यसबीचमा विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग नेकपाका एक नेताले काठमाडौँ नजिकै भेटेको खुलेको छ। सरकारले औ...
सत्यनिरूपणमा सरकारलाई चर्को दबाब, युरोप जानुअघि अफ्ठेरोमा प्रधानमन्त्री
काठमाडौं : सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाले सरकार अफ्ठेरोमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सातदिने भ्रमणका लागि युरोप निस्कनुअघि नै सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउन सरकारमाथि दबाब परेको हो। नेकपा नेतृत्वको दुईतिह...
सोलुखुम्बुमा विप्लवको सैन्य तालिम केन्द्र?
काठमाडौं : सरकारको प्रतिबन्धमा परेपछि भूमिगत रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको विप्लव समूहले सोलुखुम्बुमा तालिम केन्द्र चलाएको खुलेको छ। जनयुद्धका समयमा तत्कालीन माओवादीले नै सेल्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको जिल्लाको महानुकुलङ गाउँपालिका वडा नम्...
बालुवाटारमा ओली-प्रचण्ड दुई घण्टा वार्ता
काठमाडौं : पार्टी एककताका बेला भएको सहमतिलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतवार दुई पटक वार्ता भएको छ । दुई नेताबीच आइतवार बिहानै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बाल...
नयाँशक्ति, फोरम र राजपाबीच एकता हुँदै, राष्ट्रिय जनमुक्ति पनि मिसिने!
काठमाडौं : नयाशक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको एकता प्रक्रियामा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल प्रवेश गरेको छ। राजपासँगै एकता वार्तामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि पुगेको हो। वैकल्पिक शक्ति बन्ने दौडमा रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टरा...